ရီးယဲလ်အသင်း အဆိုးရွားဆုံး ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့တာက ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်ပါဘူး
ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံး ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးမှုများ
4 Oct 2018 . 3:35 PM
လာလီဂါထိပ်သီး ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ လက်ရှိအနေအထားက စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ တိုက်စစ်မှာ ဂိုးရဖို့ ရုန်းကန်နေရတဲ့အပြင် ခံစစ်ပိုင်း အမှားတွေကြောင့် ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားနေပြီး ပြိုင်ပွဲစုံ(၃)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်နေသလို အဲဒီ(၃)ပွဲစလုံး ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် ရီးယဲလ်အသင်း ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတာက (၃၁၉)မိနစ်အထိ ရှိနေပါပြီ။ ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့တာက ဒါ ပထမဆုံး မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကလည်း ဒီထက် ပိုဆိုးတဲ့အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးပြီး အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို Akhayar Sports ပရိသတ်တွေ ဗဟုသုတရစေဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
၁၉၈၄-၈၅ (၄၉၆ မိနစ်)
ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံး ဂိုးပေါက်ပျောက်မှု ကြာချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က နာမည်ကျော် တိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဆန်တီလာနာ Santillana ၊ ဂျော့ခ်ျဗယ်လ်ဒါနို Jorge Valdano ၊ ဘူထရာဂွေ Butragueno တို့ဟာ (၅)ပွဲအထိ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘဲ UEFA ဖလား(ယူရိုပါလိဂ်) ဆီမီးဖိုင်နယ် အင်တာမီလန်နဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲမှ ဂိုးပေါက် ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ကြတယ်။
၂၀၀၅-၀၆ (၄၀၉ မိနစ်)
၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းဟာ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကျဆင်းနေတဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက နည်းပြအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူ အသင်းကလည်း မတည်ငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒို Ronaldo ၊ ရော်ဘင်ဟို Robinho ၊ ဘက်တစ္စတာ Baptista ၊ ဇီဒန်း Zidane ၊ ရာအူးလ် Raul တို့ရှိပေမယ့် အသင်းက ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီမှာ ဗလင်စီယာ၊ ဘက်တစ်၊ အာဆင်နယ်တို့နဲ့ပွဲမှာ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘဲ (၄၀၉)မိနစ်အထိ ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်။
၁၉၇၅-၇၆ (၃၉၀ မိနစ်)
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ရာသီတွေထဲမှာ ၁၉၇၅-၇၆ ရာသီလည်းအပါအ၀င်ပါ။ ဥရောပဖလား (ချန်ပီယံလိဂ်)ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခဲ့ရသလို ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့တာက (၃၉၀)မိနစ်အထိ ရှိခဲ့တယ်။
၁၉၈၁-၈၂ (၃၈၇ မိနစ်)
၁၉၈၃-၈၄ (၃၇၄ မိနစ်)
၂၀၀၂-၀၃ (၃၆၃ မိနစ်)
၂၀၀၂ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး နောက်တစ်ရာသီမှာ ရီးယဲလ်အသင်း ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလားပြိုင်ပွဲတွေကနေ ထွက်ခဲ့ရပြီး ရာသီအစပိုင်းမှာလည်း (၃၆၃)မိနစ်ကြာ ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့တယ်။
၂၀၀၆-၀၇ (၃၂၅ မိနစ်)
အီတလီဝါရင့် နည်းပြကြီး ကာပယ်လို Capello လက်ထက်မှာလည်း ဒီ မှတ်တမ်းဆိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ရီခရီယေတီဗို၊ ဒီပို့တီဗိုတို့ကို ဂိုးမသွင်းနိုင်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သလို စပိန်ဘုရင့်ဖလား ပထမအကျော့ ဘက်တစ်နဲ့ပွဲမှာလည်း ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာပယ်လိုဟာ ရာသီကုန်မှာ လာလီဂါ ဆုဖလားကို အရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ရီးယဲလ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံး ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေပါပဲ။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အခုတစ်ပတ်မှာ အလာဗတ်စ်နဲ့ လာလီဂါ အဝေးကွင်းပွဲစဉ် ကစားရမှာဖြစ်လို့ ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးကို ရပ်တန့်နိုင်မလားဆိုတာ . . . .
ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ အဆိုးရှားဆုံး ဂိုးပေါကျပြောကျဆုံးမှုမြား
လာလီဂါထိပျသီး ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ လကျရှိအနအေထားက စိတျပကျြစရာပါပဲ။ တိုကျစဈမှာ ဂိုးရဖို့ ရုနျးကနျနရေတဲ့အပွငျ ခံစဈပိုငျး အမှားတှကွေောငျ့ ရလဒျတှေ ဆိုးရှားနပွေီး ပွိုငျပှဲစုံ(၃)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျနသေလို အဲဒီ(၃)ပှဲစလုံး ဂိုးပေါကျပြောကျခဲ့တယျ။ အခုဆိုရငျ ရီးယဲလျအသငျး ဂိုးပေါကျပြောကျနတောက (၃၁၉)မိနဈအထိ ရှိနပေါပွီ။ ရီးယဲလျအသငျးအနနေဲ့ ဆိုးဆိုးရှားရှား ဂိုးပေါကျပြောကျခဲ့တာက ဒါ ပထမဆုံး မဟုတျပါဘူး။ အရငျကလညျး ဒီထကျ ပိုဆိုးတဲ့အခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရဖူးပွီး အဲဒီအဖွဈအပကျြတှကေို Akhayar Sports ပရိသတျတှေ ဗဟုသုတရစဖေို့ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
၁၉၈၄-၈၅ (၄၉၆ မိနဈ)
ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ အဆိုးရှားဆုံး ဂိုးပေါကျပြောကျမှု ကွာခြိနျဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျက နာမညျကြျော တိုကျစဈကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဆနျတီလာနာ Santillana ၊ ဂြော့ချြဗယျလျဒါနို Jorge Valdano ၊ ဘူထရာဂှေ Butragueno တို့ဟာ (၅)ပှဲအထိ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ဘဲ UEFA ဖလား(ယူရိုပါလိဂျ) ဆီမီးဖိုငျနယျ အငျတာမီလနျနဲ့ အိမျကှငျးပှဲမှ ဂိုးပေါကျ ပွနျရှာတှခေဲ့ကွတယျ။
၂၀၀၅-၀၆ (၄၀၉ မိနဈ)
၂၀၀၀ နောကျပိုငျးဟာ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ပုံရိပျတှေ ကဆြငျးနတေဲ့ အခြိနျကာလဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက နညျးပွအပွောငျးအလဲတှနေဲ့အတူ အသငျးကလညျး မတညျငွိမျဖွဈခဲ့ပွီး နာမညျကွီး ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ရျောနယျလျဒို Ronaldo ၊ ရျောဘငျဟို Robinho ၊ ဘကျတစ်စတာ Baptista ၊ ဇီဒနျး Zidane ၊ ရာအူးလျ Raul တို့ရှိပမေယျ့ အသငျးက ရလဒျဆိုးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီမှာ ဗလငျစီယာ၊ ဘကျတဈ၊ အာဆငျနယျတို့နဲ့ပှဲမှာ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ဘဲ (၄၀၉)မိနဈအထိ ဂိုးပေါကျပြောကျဆုံးခဲ့တယျ။
၁၉၇၅-၇၆ (၃၉၀ မိနဈ)
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ အဆိုးရှားဆုံး ရာသီတှထေဲမှာ ၁၉၇၅-၇၆ ရာသီလညျးအပါအဝငျပါ။ ဥရောပဖလား (ခနျြပီယံလိဂျ)ပွိုငျပှဲကနေ ထှကျခဲ့ရသလို ဂိုးပေါကျပြောကျခဲ့တာက (၃၉၀)မိနဈအထိ ရှိခဲ့တယျ။
၁၉၈၁-၈၂ (၃၈၇ မိနဈ)
၁၉၈၃-၈၄ (၃၇၄ မိနဈ)
၂၀၀၂-၀၃ (၃၆၃ မိနဈ)
၂၀၀၂ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ဆှတျခူးခဲ့ပွီး နောကျတဈရာသီမှာ ရီးယဲလျအသငျး ရလဒျဆိုးတှနေဲ့ ရုနျးကနျခဲ့ရတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျ၊ စပိနျဘုရငျ့ဖလားပွိုငျပှဲတှကေနေ ထှကျခဲ့ရပွီး ရာသီအစပိုငျးမှာလညျး (၃၆၃)မိနဈကွာ ဂိုးပေါကျပြောကျခဲ့တယျ။
၂၀၀၆-၀၇ (၃၂၅ မိနဈ)
အီတလီဝါရငျ့ နညျးပွကွီး ကာပယျလို Capello လကျထကျမှာလညျး ဒီ မှတျတမျးဆိုးနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရဖူးတယျ။ ရီခရီယတေီဗို၊ ဒီပို့တီဗိုတို့ကို ဂိုးမသှငျးနိုငျဘဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့သလို စပိနျဘုရငျ့ဖလား ပထမအကြော့ ဘကျတဈနဲ့ပှဲမှာလညျး ဂိုးမရှိသရကေခြဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ကာပယျလိုဟာ ရာသီကုနျမှာ လာလီဂါ ဆုဖလားကို အရယူပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ ရီးယဲလျအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အဆိုးရှားဆုံး ဂိုးပေါကျပြောကျခဲ့တဲ့ မှတျတမျးတှပေါပဲ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာ အခုတဈပတျမှာ အလာဗတျဈနဲ့ လာလီဂါ အဝေးကှငျးပှဲစဉျ ကစားရမှာဖွဈလို့ ဂိုးပေါကျပြောကျနတေဲ့ မှတျတမျးဆိုးကို ရပျတနျ့နိုငျမလားဆိုတာ . . . .
by Naing Linn . 27 mins ago